कसरी Adobe Spark नि: शुल्क र कानूनी रूपमा पाउने - नि: शुल्क Adobe Spark डाउनलोड 2021
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Adobe Spark नि: शुल्क
द्वारा Ann Young, Bugurul Ganbat 2021-09-02, Nepali Blog
इजाजत पत्र: स्टार्टर योजना
उपयुक्त: वेब / आईओएस / एन्ड्रोइड
ADOBE SPARK सित्तैमा
अब तपाईं Adobe Spark क नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र एन्ड्रोइड र आईओएस उपकरणहरूको लागि अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। साथै, यो एक WEB संस्करण छ। अनुप्रयोगले उपकरणहरू प्रदान गर्दछ जुन कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई ध्यान खिच्ने सामाजिक मिडिया पोष्टहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
Adobe Spark नि: शुल्कका लाभहरू
त्यहाँ कुनै भुक्तान गरिएको Adobe Spark प्रीमियम योजनाहरू छन्
भिडियोहरूको लागि रचनात्मक परिष्करण
प्रयोगकर्ता उन्मुख: केवल minutes मिनेट मात्र अनुप्रयोग प्रयोग कसरी गर्ने सिक्न
सबै इन-वन: यो भिडियो, फोटो, र पृष्ठहरूको साथ काम गर्न सम्भव छ
रोयल्टी मुक्त छविहरू र संगीतको साथ प्रयोगकर्ताहरू प्रदान गर्दछ
मैले Adobe Spark क मूल्य निर्धारणको बारेमा के थाहा पाउनु पर्छ?
तपाईं Adobe Sparkक स्टार्टर योजना, दुबै मोबाइल र वेब संस्करणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई पेशेवर देखिने डिजाइन सिर्जना गर्न, डलर खर्च नगरीकन तपाईंको सामग्री सम्पादन र अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ। योजनामा कुनै पनि स्वादका लागि असंख्य निःशुल्क फन्टहरू र शैलीहरू समावेश छन्।
के विद्यार्थीहरूले Adobe Sparkक प्रयोग गर्न सक्दछन्?
अवश्य! यसका अतिरिक्त, Adobe विश्वास गर्दछ कि विद्यार्थी र युवाहरूले आफ्ना परियोजनाहरू बनाउने क्रममा Adobe Spark प्रयोग गर्नु पर्छ। त्यसकारण कम्पनीले विशेष प्रयोगकर्ताहरूको लागि शिक्षाको लागि विशेष निःशुल्क एडोब स्पार्क सिर्जना गर्‍यो।
Adobe Spark डाउनलोड र स्थापना कसरी गर्ने?
बाट अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सम्भव छ मार्केट खेल्नुहोस् वा अनुप्रयोग स्टोर । स्थापना पछि, तपाई आफ्नो फेसबुक खाता प्रयोग गरी साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई पोष्टहरू सिर्जना गर्न Adobe Spark अनलाइन संस्करण पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
नि: शुल्क ADOBE स्पार्क अनलाइन
के म मेरो फन्टहरू Adobe Spark अनुप्रयोगमा प्रयोग गर्न सक्छु?
हो। तपाईंले फन्ट अपलोड गरेपछि, तपाईं यसलाई कुनै पनि स्पार्क अनुप्रयोगमा वेबमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ आईओएस वा आईओएसमा फन्टलाई Adobe Sparkपोस्टमा छनौट गरेर वा विषयवस्तु चयन गरेर जुन तपाईंको फन्ट समावेश गर्दछ।
नि: शुल्क फन्टहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
त्यहाँ परियोजनाहरुको संख्या को सीमा छ कि Adobe SP होस्ट गर्नेछ?
एडोबले हाल स्पार्क प्रोजेक्टहरूको संख्या सीमित गर्दैन त्यसैले तपाईं सिर्जना गर्न र तपाईंको सामग्री अपलोड गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ।
पाइरेटेड संस्करण प्रयोगको नतीजा
Adobe SP नि: शुल्क अनुप्रयोग हो भन्ने तथ्यको बावजुद, त्यहाँ तथाकथित "क्र्याक" प्रोग्रामहरू छन् जुन थप सुविधाहरू प्रदान गर्ने दावी गर्दछ।
अनुप्रयोग प्राप्त गर्ने जोखिम जुन काम गर्दैन
सानो जोखिम यदि तपाईं एक निश्चित अनुप्रयोग को pirated संस्करण स्थापित स्थापित एक गैर-काम गरिरहेको फाईल वा जोडी समावेश एक गलत प्रोग्राम रही छ।
कानून तोड्ने को लागी जिम्मेवारी
यदि तपाइँ Adobe Sparkक नक्कली संस्करण डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले एउटा उल्लting्घन गरेकोमा सबपोइना र $ 1000 को जरिवाना लिन सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयर लाइसेन्स र तपाईंको व्यक्तिगत कम्प्यूटर वा स्मार्टफोनमा पाइरेटेड सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै। यो उल्लेखनीय छ कि केहि केसहरूमा तपाई you बर्ष सम्म जेल हुन सक्दछ।
यो एक APK फाइल स्थापना गर्न जोखिमपूर्ण छ, विशेष गरी यदि तपाईंले समुद्री डाकू स्रोतबाट फोटोशप स्पार्क डाउनलोड गर्नु भएको छ। यस फाईलमा भाइरस हुन सक्छ।
नियम अनुसार, मोबाइल मालवेयर साधारण अनुप्रयोगहरूको रूपमा वितरण गरिएको छ। अवश्य पनि, Google प्ले बाहेक, त्यहाँ अन्य अनुप्रयोग स्टोरहरू छन् जहाँ अनुप्रयोगहरू र खेलहरू भाइरसको लागि स्क्यान गरिएको छ।
यद्यपि Google उपकरणहरूले पनि सँधै मालिसियस कोड पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यसोभए, के तपाईं साना कम्पनीहरू द्वारा एन्टि भाइरस स्क्यानिंगको आशा गर्न सक्नुहुन्छ? दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर स्थापनाको परिणामहरू छन् जस्तै उपकरणको अस्थिर काम, व्यक्तिगत डेटा चोरी, असंख्य जोडहरू, इत्यादि।
आफूलाई जोखिममा नपार्नको लागि, मेरो लेख पढ्नुहोस् कसरी एडोब क्रिएटिव्ह क्लाउड नि: शुल्क पाउने।
Free for Adobe Spark शुल्क विकल्पहरू
Adobe Sparkक नि: शुल्क उन्नत सुविधाहरूको बावजुद, तपाइँ आफ्नो सामाजिक मिडिया सामग्री डिजाइन गर्न अन्य नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू र सेवाहरूमा रुचि राख्न सक्नुहुन्छ।
नि: शुल्क कन्वा प्रयोग गर्नुहोस्
असंख्य निःशुल्क टेम्पलेटहरू
तपाइँ कामको बखत छविलाई पुनःआकार दिन सक्नुहुन्न
त्यहाँ विभिन्न टेम्पलेटहरूबाट ग्राफिक तत्वहरू प्रयोग गर्न कुनै सम्भावना छैन
यदि तपाईं स्पार्कपोस्ट एडोब प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भने, त्यहाँ उत्कृष्ट विकल्प छ। क्यान्भा विकासकर्ताहरूले वेब डिजाइन सबैको लागि पहुँचयोग्य बनाउनको लागि एक लक्ष्य सेट गर्दछ।
यस उपकरणको प्रयोग गरेर, तपाई आफ्ना विचारहरूलाई ग्राफिक सामग्रीमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईलाई सबैमा कसरी कोर्याउने भनेर थाहा छैन भने। मा सेवा प्रकार्यहरू तानेर खसाल्नु । तपाईं क्यान्भा सित्तैमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि, केहि छविहरू भुक्तान गरियो।
Adobe Spark क फ्रीमा जस्तै, क्यान्भा प्रयोगकर्ताहरूको दर्जनौं टेम्प्लेटहरू, नि: शुल्क छविहरू, आइकनहरूको सlections्ग्रह, फन्ट, पृष्ठभूमि, र toहरूमा पहुँच छ। तपाइँ स्क्र्याचबाट तपाइँको टेम्प्लेट पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। अनुप्रयोग दुबै एन्ड्रोइड र आईओएस प्लेटफर्मको लागि उपलब्ध छ।
को बारे मा अधिक खोज्नुहोस् शीर्ष नि: शुल्क एडोब सफ्टवेयर तपाईको स्मार्टफोनका लागि।
नि: शुल्क को लागी सहज प्रयोग गर्नुहोस्
स्थापना आवश्यक छैन
केहि चाखलाग्दो उपकरणहरू भुक्तान गरियो
अर्को शानदार एडोब स्पार्क नि: शुल्क एनालग ईसिल हो। यस उपकरणको मुख्य लाभ यसको प्रयोगको सहजता र सामाजिक मिडिया साइटहरूको पछिल्लो प्रचलनहरू अनुसार टेम्प्लेटहरूको लगातार अपडेट गर्नु हो।
उदाहरण को लागी, वे इंस्टाग्राम कहानी टेम्पलेट को एक विशाल चयन प्रस्ताव। तपाईंको प्रोजेक्टहरू सिर्जना गर्दा, तपाईं आधारभूत स्तर वा डिजाइनर-स्तर प्रकार्यहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तह, डिजाइन मर्ज (बिभिन्न डिजाइनका तत्वहरूलाई मिलाउनुहोस्) र पाठ प्रभावहरू।
Easyil दुबै शुरुआती र पेशेवर डिजाइनरहरूका बीच धेरै लोकप्रिय छ किनकि यो सिक्न सजिलो छ र बिभिन्न सुविधाहरू छन्।
नि: शुल्क डिजाईनर प्रयोग गर्नुहोस्
सरल तर शक्तिशाली डिजाइन उपकरण
ड्र्याग एण्ड ड्रप सुविधा
छवि, फन्ट, र colors र पाठ सम्पादन गर्ने क्षमता
तह, प्रभाव, र बहु-पृष्ठ फाईलहरू
यदि तपाईंसँग इन्टरनेट पहुँच छ भने, तपाईं जहाँसुकैँ डेसिगनर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ किनकि यो अनलाईन सफ्टवेयर हो। सबै सुविधाहरू प्रयोग गर्न, तपाईंले खाता सिर्जना गर्न आवश्यक पर्दछ।
तपाईं आफ्नो ईमेल, फेसबुक वा गुगल खाता प्रयोग गरेर यो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम नि: शुल्क भएता पनि, तपाईं एक मासिक वा वार्षिक प्रीमियम सदस्यता खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, यदि तपाईं एक शुरुआती हुनुहुन्छ भने, नि: शुल्क संस्करणका सुविधाहरू तपाईंको लागि पर्याप्त हुनेछ।
कार्यक्रम यस्तो तरीकाले कन्फिगर गरिएको छ कि अनुभवहीन प्रयोगकर्ताहरूले पनि ब्यानर, फ्लायरहरू, पोस्टरहरू, निमन्त्रणाहरू, आँखा लिने मार्केटि materials सामग्री, व्यवसाय कार्ड, विज्ञापन, सामाजिक मिडिया ग्राफिक, आदि डिजाइन गर्न र सिर्जना गर्न सक्छन्।
तपाईं डेस्कटप संस्करण वा मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहोला, यो तपाईंको पहिलो प्रोजेक्ट सिर्जना गर्न सजिलो हुनेछ। सुरू गर्न तपाईले प्रोजेक्ट र प्रि-फरम्याट गरिएको टेम्पलेटको प्रकार छान्नु पर्छ। यदि तपाईं अनुभवी डिजाइनर हुनुहुन्छ भने, तपाईं स्क्र्याचबाट प्रोजेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ।
Adobe Spark नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
सक्कली सोशल मिडिया पोष्टहरू सिर्जना गर्न म तपाईंलाई Adobe Spark सित्तैमा प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु, किनकि यो अनुप्रयोगले ठूलो साचो उपकरण र टेम्प्लेटहरूको निःशुल्क सेट गर्दछ। यसबाहेक, विकासकर्ताहरूले एक धेरै विनम्र मूल्यमा थप सुविधाहरू प्रस्ताव गर्दछ। मैले Adobe Sparkको बारेमा मनपराउने मुख्य कुरा कार्य प्रक्रियाको क्रममा बिल्कुल सबै तत्वहरूलाई अनुकूलित गर्ने क्षमता हो।
जाँच गर्नुहोस् उपलब्ध Adobe छुट कम लागतमा तपाइँको मनपर्ने अनुप्रयोगहरू प्राप्त गर्न।
Adobe Spark फाइदाहरू
Visme अनलाइन डिजाइन सॉफ्टवेयर समीक्षा 2021
Online Photoshop डाउनलोड गर्नुहोस्